Ecodesign: ihe ọ bụ, njirimara na uru | Green Renewables
Portillo nke German | 28/04/2022 12:00 | Gburugburu
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mmụba nke ụlọ ọrụ na mmekọrịta ọha na eze banyere gburugburu ebe obibi emeela ka ọ pụta ìhè ecodesign. Imegharị ihe mkpofu enwetawo mgbasa ozi karịa na mgbasa ozi, dịka ọmụmaatụ site n'ịkwalite ịzụrụ na ire ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, nke a bụ ihe nleba anya elu nke e mere iji belata ihe onwunwe anyị na-eri na ihe mkpofu anyị na-emepụta. Maka nke a, ọ dị mkpa itinye aka na usoro nchịkwa iji weta ecodesign na gburugburu ebe niile e wuru.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị ihe niile ị chọrọ ịma banyere ecodesign, ya àgwà na mkpa.
1 Gịnị bụ ecodesign
2 Njirimara nke ecodesign
3 Ihe atụ
4 Mmepụta na atụmatụ na-adịgide adịgide
5 uru gburugburu ebe obibi
Gịnị bụ ecodesign
Ecodesign bụ akụkụ nke usoro mmepe ngwaahịa nke na-achọ ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa. Enwere ike ikwu ya inweta nkwado akụ na ụba bụ isi ihe maka usoro njikwa, n'ihi na site n'ịmepụta na nhazigharị ngwaahịa ndị na-asọpụrụ gburugburu ebe obibi, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị mmebi nke ihe ndị dị ndụ, nkwụsị nke ihe ndị sitere n'okike na mmetụta ndị na-akwado ya na-emetụta ihe ndị dị ndụ na gburugburu ebe obibi na ahụike mmadụ. Ụkpụrụ nke ecodesign bụ:
Ịrụ ọrụ nke ọma n'ichepụta ngwaahịa, ya bụ, iji ihe onwunwe na ike kacha nta mee ihe.
Ezubere ka a gbasaa, na-enye ohere ịmegharị ngwaahịa ahụ n'ọdịnihu, nke ọ bụla n'ime akụkụ ya nwere ike ịmata ngwa ngwa ma kewapụ ya maka mkpofu ya ziri ezi dịka ọdịdị ya na nhazi ya si dị.
Jiri otu ihe "bio" ma ọ bụ karịa mepụta ngwaahịa iji mee ka usoro imegharị ihe dị mfe.
Jiri ụdị na ihe ndị na-adịgide adịgide.
Mgbanwe na ohere nke ijikwa na imegharị ngwaahịa ahụ.
Belata nha nke ngwaahịa iji belata ikuku ikuku ikuku (GHG) n'oge njem. N'ihi ya, enwere ike ibufe ngwaahịa ndị ọzọ kwa njem, na-ebuli ohere na oriri mmanụ ọkụ.
Ịnagide ngwaahịa dị ka ọrụ ọ bụghị dị ka ihe nkịtị, iji kpachie ojiji ha na mkpa ọ bụghị n'ọchịchọ nke ihe onwunwe, na-egosi ugbu a ụkpụrụ ahịa.
Kwado teknụzụ ọhụrụ iji melite arụmọrụ ngwaahịa.
Kesaa ma jikọta ozi nkwado ngwaahịa na nhazi ya.
Njirimara nke ecodesign
Na mmechi, ebumnobi nke ecodesign bụ iji belata mmetụta gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa anyị na-eri n'oge ndụ ha bara uru ma kwe nkwa ịdịmma na ịdịmma ndụ nke ndị ọrụ. Ụfọdụ n'ime njirimara ecodesign bụ:
Na-eme ka ngwa nke akụ na ụba okirikiri.
Ị nwere ike belata ọnụ ahịa nhazi na mbupu ngwaahịa.
Ọ na-eme ka usoro mmepụta ihe dịkwuo mma na ya mere àgwà ngwaahịa ahụ nwetara.
Ọ na-enye aka na njirimara ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ na-atụ aro ọkwa anọ nke na-enye ohere ime ihe na nkwalite, nhazigharị, ịmepụta na nkọwa nke ngwaahịa ọhụrụ na usoro mmepụta ọhụrụ.
Zere imefusị ihe onwunwe.
Ozugbo ndụ bara uru nke ngwaahịa ahụ agwụla, tụlee na a na-emegharị ngwaahịa ahụ ma jiri ya mee ihe, na-enye uru maka ihe mkpofu.
Enwere atụmatụ ecodesign dị iche iche dịka: wheel LiDS na atụmatụ PILOT.
N'ihe atụ nke ecodesign egosiri n'okpuru ebe a, ụfọdụ bụ akụkụ nke ndụ anyị kwa ụbọchị, ebe ndị ọzọ na-egosi mmepe ndị ka dị obere:
Ecodesign nke friji, friza na ngwa ndị ọzọ dị ka ndị na-ekpo ọkụ, igwe na-asa ákwà na efere efere, nke European Commission (EC) na-achịkwa.
Nhazi na iwu ụlọ obibi.
Igwe kọfị Italiantali n'ihi na ha anaghị eji nzacha akwụkwọ.
A na-eji ihe eji akara FSC eme ngwá ụlọ ( Council forest Stewardship Council) na ihe ejigharịgharị.
A na-ere ngwá ụlọ anaghị agbakọta, na-ebelata nha ngwaahịa yana ịkwalite mbupu.
Ngwongwo imewe nke enwere ike ibughari dị ka oche ndị mepere emepe.
Jiri ihe mkpofu akwa, plastik mee uwe.
Mmepụta na atụmatụ na-adịgide adịgide
N'ime ụwa na-akpụ akpụ n'ebe 8 ijeri mmadụ, ochie nlereanya nke linear aku na uba bụ ihe mgbe ochie na-eduga anyị n'ime a na-ejighị n'aka n'ọdịnihu. Amụrụ Ecodesign n'ime usoro a, ngwaahịa na-adigide na-etinye ụkpụrụ gburugburu ebe obibi na ọkwa ha niile: echiche, mmepe, njem na imegharị ihe.
Anyị ga-emepụta nke ọma na nke ọma, n'ihi ihe doro anya: akụrụngwa na ihe ndị sitere n'okike enweghị njedebe, ma ọ bụrụ na anyị anaghị elekọta ha, ha nwere ike ịpụ. Ụfọdụ, dị ka mmiri, dị oké mkpa maka ndụ, ebe akụkụ ndị bụ isi nke akụ na ụba na-adabere na mineral, dị ka ụlọ ọrụ nkà na ụzụ. Ọ bụrụ na anyị gbakwunye carbon dioxide emissions na ike oriri na mmepụta ụlọ ọrụ, ụwa agaghị akwụ ụgwọ.
Nsonaazụ nke ịzụ ahịa - dị ka Greenpeace si kwuo, anyị na-eji 50% ihe ndị sitere n'okike taa karịa afọ 30 gara aga - eduzila United Nations (UN) na-achọ ụdị mmepụta ọhụrụ iji kwalite akụrụngwa na ume, ịzụlite ume ọhụrụ, ịkwado akụrụngwa, melite ohere ịnweta ọrụ ndị bụ isi na ịmepụta ọrụ gburugburu ebe obibi na àgwà dị mma.
Uru gburugburu ebe obibi nke mmepụta na-adigide na-eritekwa uru na ụlọ ọrụ na ụmụ amaala. UN na-arụ ụka na usoro ahụ dị mma maka onye ọ bụla n'ihi na ọ na-eme ka ndụ ndụ dịkwuo mma maka ọtụtụ nde mmadụ, na-ebelata ịda ogbenye, na-abawanye asọmpi ma na-ebelata ego akụ na ụba, gburugburu ebe obibi na ọha mmadụ.
uru gburugburu ebe obibi
Uru nke ecodesign n'usoro nke ngwaahịa na echiche ọrụ dị ọtụtụ ma nyere aka belata akụkụ dị iche iche gburugburu ebe obibi nke ngwaahịa ọdịnaladị ka njikwa mkpofu.
N'ụzọ dị mwute, e nwekwara ụfọdụ adịghị ike nke na-egbochi usoro a ka a nakweere dị ka ụkpụrụ na ọgbọ nke ngwaahịa na ọrụ, dị ka obere ihe ọmụma nke onye na-azụ ahịa nwere banyere ngwaahịa ndị a, ọnụ ahịa ngwaahịa dị elu karịa nke ngwaahịa omenala. n'ọtụtụ oge , na-achọ ihe maka imewe uzo ozo na-ewebata ngwaahịa ndị a na nnukwu asọmpi ahịa akụkụ, dị ka plastic ụlọ.
Yabụ, dị ka nkwubi okwu, anyị nwere ike ịhụ na n'agbanyeghị uru mara mma nke ecodesign ma ndị na-emepụta na maka ndị na-azụ ahịa, adịghị ike ya ka na-egbochi ewu ewu ya n'ahịa taa na, ya mere, na-egbochi iji ya na nkuchi anyị na oriri àgwà. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịnọgide na-ahụ ya dị ka ihe ọzọ dị mkpa iji dozie nnukwu nsogbu gburugburu ebe obibi na-emetụta anyị, jikọtara ya na usoro iwu kwadoro, oriri ọrụ na ịnakwere nhụta gburugburu ebe obibi zuru oke na ọha mmadụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ecodesign na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Ecodesign